AFOOLA OROMOO KEESSAA: RAACHAA FI MARAATOONII: Tolasaa Raggaasaa – Beekan Guluma Erena
AFOOLA OROMOO KEESSAA: RAACHAA FI MARAATOONII: Tolasaa Raggaasaa	Beekan Erena
AFOOLA/OROMO FOLKLORE February 4, 2017March 17, 2017#OROMOREVOLUION
RAACHAA FI MARAATOONII
Bara tokko raachawwan hedduun walitti qabamanii fiigichaa maraatoonii fiiguudhaaf marii gaggeessan. Marii isaanii kanaanis raachonni guyyaa dorgommii kanaa dorgommicha ilaaluufis ta’e fiiguuf argaman hunduu akka hirmaatan irratti walii galan. Sana booda raachonni hunduu hamma guyyaan qabame gahuutti shaakala dheeraa erga godhanii booda guyyaan fiigicha maraatoonii isaanii sun geenyaan raachonni dorgommicha irratti argaman martuu dorgommicha eegalan. Egaa akkuma beekamu guyyaa dorgommiin jiraatu daawwataa, deeggaraa fi mormaan biraa hin dhabamu mitiiree. Mormaa gaafaan jedhu akkuma mootummaa keenyaa kana waan hundaa gara siyaasaatti na jalaa hin jijjiiriinaa; ani kanin jedhe fiigichaan kun akka hin godhamne kan fedhii hin qabne jiraachuu malu ta’a jechuu kooti. Egaa akkuma yaadametti fiigichaan kun sa’atii hanga micro second deemee firinbaan ogeessa atileetii raachotaan afuufamee eegalan. Silaa kubbaa miilaa seetee kan fiigichaa irratti firinbaan afuufamu akka hin jenne. Kanan gaafan elementary jiru barsiisaan G.J.Q keenya qabxii 100 irraa nuuf guutuuf nu fiigsu san arge malee ergasii dorgommii fiigichaa ilaalee hin beeku. Fiigichi eegalamee osuma fiiganii deeggartoonni daandiirra bakka ka’umsaa hanga bakka galumsaa (xumuraa) gahaniitti hiriiranii jiran hunduu “isin yaa raachotaa amma dhugumaan akka kanaa quruphisaa fiigdanii mo’achuudhaafi deemtuu?; osoo achi hin gahiin karaatti duutu maaloo hin dhama’iinaa” jedhu. Ammas tokko yoo darban inni biraan akkasuma jedha. Haaluma kanaan raachawwan hunda eegalan abdii kutachaa, abdii kutachaa deemuun fiigichaa gidduudhaan dhaabanii bahan. raacha tokkittiin qofti fiigichaa kana injifattee badhaasa achitti qophaa’e sana fudhatte. Egaa badhaasichi maal turee? Kan mo’ate dhalaa moo dhiiradhaa? Dorgommichi saalaan adda hin bahuu? Moo lamaan isaaniiyyuu bakkuma tokkotti dorgomanii? Akka jettanii yaaddan nan beeka. Garuu ammaaf raacha guyyaa sana ture argee hin gaafanne barbaadaan jira yoon argadhe gaafadheen isinitti hima. Sana booda raacha injifannoo kana argatteen “injifannoo kee duuba gargaarsa kan siif gochaa ture maaltu jiraa?” jedhanii gaafatan. raachi sun deebii hin kennineef ni calliste. Ammas gaafatan ni calliste. Achumaan qorannoon irratti gaggeeffamnaan raachi kun gurri ishee waan hin dhageenyeef ykn duudaa waan ta’eef JECHOOTA DAANDII FIIGICHAA SANA IRRATTI JEDHAMAA TURE HIN DHAGEENYE. Kanaaf injifannoo galmeesse meedaliyaa badhaafame.
← YEROOKEE MALEE HINDU’IIN:BILBILAA HARKAA FI MIDHAA INNI QABU (Smart phone is killing you slowly):Dr.Yona.
GUFUU NAMAA KAAYAAN ABBUMA KAAYAN ABBUMA KAAYE DHAHA: →